Ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana any Mosko izao dia mitaky porofon'ny vaksiny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana any Mosko izao dia mitaky porofon'ny vaksiny COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Porofon'ny vaksiny COVID-19 izao takiana izao hitsidihana trano fisakafoanana sy fisotroana any Moskoa
Izay manana porofon'ny vaksiny, porofo fa voan'ny coronavirus izy tao anatin'ny enim-bolana lasa, na fitsapana PCR ratsy tao anatin'ny telo andro lasa izay no homena ny taratasy fanamarinana nomerika.
Ny mponina ao an-tanàna izao dia takiana amin'ny scan ny kaody QR alohan'ny hidirany amin'ny toerana fandraisam-bahiny.
Manomboka amin'ny 28 Jona, ny rafitra dia ho lasa "voatery ho an'ny trano fisakafoanana sy kafe rehetra te hanohy hiasa toy ny mahazatra."
Ireo izay vao nahavita nitifitra vaksinina iray dia voalaza fa ho mendrika ao anatin'ilay tetika ihany koa.
Fampandrenesana COVID-19 vaovao no ambara eto an-drenivohitra Russia ho an'ireo mbola tsy nahazo jab coronavirus na voan'ny virus.
Moscow Ny ben'ny tanàna Sergey Sobyanin dia nanambara fanaraha-maso vaovao manohitra ny COVID anio izay hitaky ny mponina ao an-tanàna hanara-maso kaody QR alohan'ny hidirany amin'ny toeram-pandraisana fandraisam-bahiny ao anatin'izany ny fisakafoanana, ny tribon-tsakafo, ny trano fisotroana ary ny toerana malalaka hafa.
Izay manana porofon'ny vaksiny, porofo fa voan'ny coronavirus izy tao anatin'ny enim-bolana lasa, na fitsapana PCR ratsy tao anatin'ny telo andro lasa izay no homena ny taratasy fanamarinana nomerika. Ireo izay vao nahavita nitifitra vaksinina iray dia voalaza fa ho mendrika ao anatin'ilay tetika ihany koa.
"Mbola tena sarotra ny raharaha amin'ny fiparitahan'ny Covid," hoy ny ben'ny tanàna. “Maherin'ny 14,000 ny olona marary mafy any amin'ny hopitaly. Mihetsika tanteraka ny rafitra fitsaboana. ”
Manomboka amin'ny 28 Jona, ny rafitra dia ho lasa "voatery ho an'ny trano fisakafoanana sy kafe rehetra te hanohy hiasa toy ny mahazatra." Ny sakafo sy ny fandefasana entana no ho safidy tokana ho an'ireo tsy manana kaody QR. Olona roa tapitrisa ao amin'ny tanàna lehibe indrindra any Eropa no voalaza fa efa nahazo ny fatra voalohany.
Efa noraràn'ny tanàna tamin'ny fomba mahomby ny fiainana amin'ny alina, miaraka amin'ny fandrarana mandritra ny tapa-bolana ny trano fisotroana sy ny klioba manompo mpiaro ny 11 ora alina.
Mandritra izany fotoana izany dia nohamafisina ny lalàna teo aloha mandrara ny hetsi-bahoaka faobe, ka tsy afaka hanana mpanjifa mihoatra ny 500 eo an-toerana amin'ny fotoana rehetra.
Ny herinandro lasa teo dia i Moskoa no tanàna voalohany manerantany nanao ny vaksiny ho takiana ho an'ireo manana andraikitra eo imasom-bahoaka. Ny orinasa amin'ny indostria toa ny fandraisam-bahiny, ny fitaterana ary ny fialamboly dia tsy maintsy manaporofo fa ny 60% amin'ireo mpiasan'izy ireo dia nahazo jab na tsy maintsy miatrika sazy mihoa-pampana. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa afaka mampiato ny mpiasa ny orinasa raha tsy mandoa vola mba hamenoana ny quota-n'izy ireo. Fitsipika mitovy amin'izany no napetraka tany St. Petersburg sy faritra Rosiana hafa.
Tamin'ny fiandohan'ity andro ity dia niantso ilay hetsika ho “lalao tsy marin-toetra” ny mpiaro ny zon'olombelona Rosiana Tatiana Moskalkova. Nilaza izy fa "ny rafitra ampiharana azy dia manome psychosis be dia be ary mahatonga ny olona hatahotra faneriterena."